မက်ဆီ ရှိနေခြင်းအတွက် မည်သူ့ကိုမှ တောင်းပန်စရာ မလိုဟု ဗဲလ်ဗာဒီပြောဆို၊ လာလီဂါ ချန်ပီယံဖြစ? - Yangon Media Group
မက်ဆီ ရှိနေခြင်းအတွက် မည်သူ့ကိုမှ တောင်းပန်စရာ မလိုဟု ဗဲလ်ဗာဒီပြောဆို၊ လာလီဂါ ချန်ပီယံဖြစ?
ဘာစီလိုနာနည်းပြဗဲလ်ဗာဒီက အသင်းအနေဖြင့် တိုက်စစ်မှူးမက်ဆီအပေါ် အလွန်အမင်း မှီခိုအားထားနေရဟန်ရှိသော်လည်း မက်ဆီကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းအတွက် မည်သူ့ကိုမှ တောင်းပန်နေရန်မလိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဗဲလ်ဗာဒီသည် လာမည့်သီတင်းပတ်တွင်ကစားရမည့် လီဗာပူးနှင့် ချန်ပီယံလိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲအတွက် အနားပေးသည့်အနေဖြင့် လီဗန်တေးနှင့်ပွဲတွင် မက်ဆီကို ပွဲထွက်စာရင်း၌ အနားပေးခဲ့သော်လည်း မက်ဆီမှာလူစားဝင်ကစားခဲ့ပြီး အသင်းအတွက် တစ်လုံးတည်းသောအနိုင်ဂိုးကို သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ဗဲလ်ဗာဒီက ”မက်ဆီဟာ ကျွန်တော်တို့ ကို အခက်အခဲတွေကြားကနေ အမြဲတမ်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာ အားလုံးအသိပါပဲ။ မက်ဆီကို ပိုင်ဆိုင်ထားရခြင်းအတွက် ကျွန် တော်တို့ တောင်းပန်နေစရာမလိုပါဘူး။ အသင်းမှာသူရှိနေတာ အသင်းအတွက် ကောင်းပါတယ်။ အသင်းမှာ တခြားသူတွေ ထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့ဇာတ်ဆောင် တစ်ဦးရှိ တယ်ဆိုရင် အဲဒါက မက်ဆီပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ အသင်းရဲ့ကစားဟန်ကို ပုံဖော်ပေးနိုင်သူဖြစ်သလို သူကပဲကျွန်တော်တို့ကို တွန်းအားဖြစ်စေပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဘာစီလိုနာအနေဖြင့် မက်ဆီ၏သွင်း ဂိုးကြောင့် လီဗန်တေးကိုအနိုင်ရခဲ့အပြီး တွင် နောက်ဆုံး ၁၁ရာသီအတွင်း ရှစ်ကြိမ် မြောက် လာလီဂါဆုဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာကစားသမားဘဝတွင် လာ လီဂါချန်ပီယံဆု ၁ဝ ကြိမ်ရရှိခဲ့သော မက်ဆီမှာလည်း ကစားသမားဟောင်း အင်နီယေစတာ၏စံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့သည်။
လာလီဂါချန်ပီယံဆုကို ယခုကဲ့သို့ နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ ပြီးနောက် အသင်းအနေဖြင့် လက်ကျန်ပြိုင်ပွဲများဖြစ်သော စပိန်ဘုရင့်ဖလားနှင့် ချန်ပီယံလိဂ်တို့တွင် ဗိုလ်စွဲရန်ကြိုးစားခြင်းဖြင့် တစ်ရာသီအတွင်း ဆုဖလားသုံးလုံးရယူသွားမည်ဟု နည်းပြဗဲလ်ဗာဒီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဗဲလ်ဗာဒီက ”လာလီဂါချန်ပီ ယံဆုအတွက် ပျော်ရွှင်မိပေမယ့် ရှေ့မှာ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ အမှတ်ကွာဟချက်နဲ့ ပြိုင် ဘက်အသင်းတွေရဲ့ အနေအထားကိုကြည့်ရင် ချန်ပီယံဆုရယူနိုင်ခဲ့တာဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် မလွယ်ပါဘူး”ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဘာစီလိုနာသည် ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင် လီဗာပူးနှင့် ရင်ဆိုင်ရန်ရှိနေသလို စပိန်ဘုရင့် ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင်မူ လာလီဂါ၌ အဆင့်-၆ နေရာ၌ရပ်တည်နေ သော ဗလင်စီယာနှင့်ရင်ဆိုင်က စားရမည်ဖြစ်သည်။
ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ တက်နိုင်ပါက ကိန်း ကစားနိုင်မည်ဟု ပိုချက်တီနို ဆို
ဟားခါးမြို့ရေရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းမပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများကို အရေးယူမည် ဟုဆို
နိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲတွင် နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် အဖြစ် အမျိုးသမီး တစ်ဦးမျှ မပါဝင်
စံဇာဏီဘို၏ ထောင်ပြေး မင်းအောင်နှင့် ကိုးတံခါးလူရှင် သင်္ချိုင်းစာအုပ်နှင့် မျိုးကိုမျိုး၏ မြ
ဟာဇက် အသင်းပြောင်းရန် အချိန်ကျပြီဟု မာတီနက်ဇ် တိုက်တွန်း
အပစ်ရပ်ထားသည့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေငါးခုထဲတွင် တပ်မတော်နှင့် TNLA တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးဟုဆို
ရခိုင်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းရောက် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ကျောင်းတက်နိုင်ရေး စီစဉ်ပေးမည